एनआरएनए सम्मेलन भोलिदेखि, यी हुन् उम्मेदवारहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एनआरएनए सम्मेलन भोलिदेखि, यी हुन् उम्मेदवारहरु
भोलि अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । विश्वभरका सयौं एनआरएन नेता र प्रतिनिधीहरु काठमाडौं आइसकेका छन् । यो विश्व सम्मेलनले आगामी दुईवर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरुको रस्साकस्सी र दौडधुप पनि निकै नै तीब्र छ । उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरु आफ्नालागि भोटमाग्न र प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका छन् ।
अध्यक्ष बन्ने दाउपेच
एनआरएन आईसीसीको नेतृत्व लिनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुको दौडधुप र दाउपेच पनि चर्को बनेको छ । राजनीतिक लविंगदेखि एनआरएन डेलगेट्स बसेका कोठाकोठा र होटेलहोटेलमा पुगेर उम्मेदवारीको घोषणा गरेकाहरुले भोट मागिरहेका छन् ।
हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला बाहिरका कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिस्पर्धा जस्तै चल्यो भने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा भोट घट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उम्मेदवारहरुको व्ययस्तता थप बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भेटेर आफ्ना लागि माहौल तयार गर्नेदेखि डेलिगेट्सहरुलाई दारुपानी खुवाएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास समेत भइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म अध्यक्षका रुपमा ३ जना एनआरएन नेताहरु चर्चामा रहेका छन् । सुरुमा कुमार पन्तले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा रहेपनि भवन भट्टसँगको समझदारीपछि उनले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने मनस्थीति बनाएपछि उपाध्यक्षका लागि तीनजना उम्मेदवारहरु चर्चामा छन् ।
एनआरएन आईसीसीका वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी जमुना गुरुङले आगामी कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारीको घोषणा गरेकी छिन् । २ दशकभन्दा लामो समयदेखि अष्ट्रेलियामा बस्दै आएकी जमुनालाई त्यहाँको पत्रिकाले अष्ट्रेलियाका धनी महिलाहरुको सुचीमा ११ औं नम्बरमा राखेको थियो । अष्ट्रेलियामा धनी महिलाको सुचीमा पर्ने दक्षिण एसियाबाटै पहिलो महिला थिइन् जमुना । सन् १९९० मा विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया गएकी जमुना मेलबर्न इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजीकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् । उनले शेष घलेलाई विभिन्न ब्यापारिक काममा सहयोग गर्दै आएकी छिन् भने एनआरएन आन्दोलनमा पनि घलेकै साथमा छिन् ।
त्यस्तै जापानका सफल व्यवसायी भवन भट्टले एनआरएन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । अध्ययनका लागि २० वर्षअघि जापान पुगेका गोरखाका भवन भट्ट अहिले जापानमा सफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित भएका छन् । भट्टको अहिले जापानमा मात्रै २९० होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गरिरहेका छन् । रेस्टुराँमा अहिले पाँच हजार जापानी र २५० नेपालीले रोजगारी पाएका छन् । सन् १९९७ मा २१ वर्षको उमेरमा टोखाइ विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि उनी जापान गएका थिए । ती होटल तथा रेस्टुराँबाट वार्षिक रु ३२ अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुने गरेको छ । यस्तै उनले नेपालमा पनि टिबिआइ समूहको अध्यक्षका रुपमा सञ्चार, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा करिब रु दुई अर्ब लगानी गरेका छन् ।
‘कारोबार’ दैनिक, युनाइटेड बु्रअरी, बिबी एअरवेज, धुलिखेल माउण्ट रिसोर्ट, कलेज, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्गलगायत २३ वटा नेपाली संस्थामा उनको लगानी छ । सन् २००३ मा सम्पन्न भएको एनआरएनको पहिलो विश्व सम्मेलनदेखि नै यो संस्थामा सक्रिय भट्ट २००३–०४ मा जापान एनआरएनको तदर्थ समितिका सदस्यका रुपमा काम गरे ।
एनआरएन जापानको अध्यक्ष, एनआरएनको आईसीसीको कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षको दोस्रो कार्यकालपछि भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसैगरी अध्यक्षमा नै उम्मदेवारीको घोषणा गरेका टीबी कार्की सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मको कार्यकालमा एनआरएन आईसीसीका उपाध्यक्ष थिए । अहिले अध्यक्षका लागि कार्की चुनावी दौडधुपमा छन् । कार्की विगत १२ वर्षदेखि एनआरएनएमा सक्रिय छन् । सन् २००७ मा कतारबाट आईसीसी सदस्य बनेका थिए कार्की । त्यसपछि पाँचौं विश्व सम्मेलनबाट उनी एनआरएन आईसीसीको सचिव बनेका थिए ।
को को छन् अन्य उम्मेदवारहरु ?
२ जना निर्वाचित हुने उपाध्यक्ष पदका लागि अहिलेसम्म ६ जनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । युरोपबाट कुमार पन्त र कुल आचार्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् भने अमेरिकाबाट सोनाम लामा र खगेन्द्र जीसीले । मधयपूर्वबाट कतार निवासी नरेन्द्र भाटले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् भने एसियाको जापानबाट चिरञ्जिवी थापाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै एकजना निर्वाचित हुने महिला उपाध्यक्षमा रञ्जु वाग्ले थापा र सपिला राजभण्डारीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
के के हुँदैछ सम्मेलनमा ?
एनआरएनको ग्लोबल सम्मेलन आगामी अक्टोबर १४ बाट सुरु हुँदैछ । बलियो भविश्यका लागि महिला, युवा र दोश्रो पुस्ता भन्ने नारासहित हुन गइरहेको एनआरएनको विश्व सम्मेलनमा झण्डै १५ सय प्रतिनिधी पर्यवेक्षकहरु उपस्थीत हुनेछन् ।
१४ अक्टोबरमा होटल हायातमा एनआरएनको ग्लोबल सम्मेलनको उद्घाटन हुनेछ । त्यसको भोलिपल्ट १५ अक्टोबरमा एनआरएनए आईसीसीको साधारणसभा र बन्दशत्रको आयोजना गरिनेछ । १६ अक्टोबरमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ भने १७ अक्टोबरमा समापन कार्यक्रम गरिनेछ ।
१४ अक्टोबरमा प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र १५ अक्टोबरको विहानसम्म मतदाताको अन्तिम सुची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । अक्टोबर १५ मा नै उम्मेदवारी दर्ताको प्रकृया सुरु हुनेछ भने अक्टोबर १६ को दिउसो १२ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम सुची प्रकाशित हुनेछ । १६ अक्टोबरमा दिउसो १ बजेदेखि निर्वाचन प्रारम्भ हुनेछ भने निर्वाचन सम्पन्न भएको १ घण्टामा मतगणना गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिनेछ ।